Sistemụ nchekwa nchekwa ike jụrụ ndị na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ - China Energy nchekwa usoro jụrụ ndị nrụpụta
BlackShields EC series top mounted air conditioner bụ nke e mere ka ọ bụrụ ihe nchịkwa ihu igwe maka sistemụ nchekwa ike batrị (BESS). N'ịtụle banyere arịrịọ nchịkwa okpomọkụ maka batrị na nhazi nke ihe nchekwa nchekwa ike, a na-emepụta ihe mkpuchi ikuku dị ka ihe ngwọta nke a pụrụ ịdabere na ya na nke dị irè nke na-arụ ọrụ n'elu, nnukwu ikuku ikuku na ikuku si n'elu akpa ahụ.
BlackShields MC usoro mmiri jụrụ oyi bụ mmiri chiller nke emebere maka ịchịkwa ihu igwe nke sistemụ nchekwa batrị. Site na imewe mono-block, kọmpat kọmpat, mpụta dị elu, nso isi iyi ọkụ, oke ọkụ dị elu, obere mkpọtụ na nzaghachi ngwa ngwa, nkeji mmiri jụrụ oyi nwere ike bụrụ ihe ndozi dị mma na ntụkwasị obi maka BESS.
BlackShields EC usoro monoblock ikuku oyi ka emebere dị ka ihe ngwọta na-achịkwa ihu igwe maka sistemu nchekwa ike. N'iburu n'uche banyere arịrịọ nchịkwa okpomọkụ maka batrị na nhazi nke nchekwa nchekwa ike, a na-emepụta ihe mkpuchi ikuku dị ka ihe ngwọta nke a pụrụ ịdabere na ya na nke ọma na usoro monoblock, nnukwu ikuku ikuku na ikuku elu.